Ac Milan Oo Xasuuqday Juventus, Zlatan Ibrahimovic & Cristiano Ronaldo Oo Goolal Isugu Jawaabay & Rossoneri Oo Ka Yaabsatay Hogaamiyayaasha Horyaalka. – Kooxda.com
HomeSerie AAc Milan Oo Xasuuqday Juventus, Zlatan Ibrahimovic & Cristiano Ronaldo Oo Goolal Isugu Jawaabay & Rossoneri Oo Ka Yaabsatay Hogaamiyayaasha Horyaalka.
July 8, 2020 Abdiwali Adan Jamac Serie A, Wararka Maanta 1
Kooxda Ac Milan ayaa xasuuq lama filaan ah u gaysatay kooxda hogaaminaysa horyaalka Serie A-da ee Juventus kulan ka dhacay garoonka San Siro kana tirsanaa todobaadkii 31-aad ee horyaalka.
Kulanka ayaa ahaa mid adag oo ay labada kooxood ku soo galeen digtoonaan xoogan iyada oo si weyn loo fulayay in ay Juventus si dhib yar ku badiso kulanka siina dheeraysato hogaanka horyaalka.
Kooxaha Juventus iyo Ac Milan ayaa kulanka u ciyaarayay si xiisad leh iyada oo ahayd ciyaar aad loogu madadaashay looguna raaxaystay.
Qaybtii hore ee ciyaarta oo cadayn u ahayd sida uu kulanku u adag yahay ayaa ku dhamaatay bar-baro gool la’aan ah inkasta oo ay labada kooxoodba sameeyeen fursado fiican.
Laakiin qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa ahayd gabi ahaan mid aad uga duwan qaybtii hore iyada oo la kala dhaliyay goolal aad u badan waliba ayna labada kooxood waxba iskula hadhin.
Sidii la saadaalinayay ama la filayay Juventus ayaa daqiiqadii 47-aad dhalisay goolka 1-aad ee ciyaarta iyada oo uu u dhaliyay xiddiga khadka dhexe ee Adrien Rabiot kaas oo ciyaarta ka dhigay 1/0 ay Juventus ku hogaaminayso ciyaarta.
Cristaino Ronaldo ayaa sii xaqiijiyay saadaasha dad badan isaga oo daqiiqadii 53-aad dhaliyay goolka 2-aad ee kooxdiisa isaga oo ciyaarta ka dhigay 2/0 ay Juventus ku raaxaysanayso.
Laakiin wax walba waxa ay iska badaleen halka dambe kadib 2-da gool ee Juventus iyada oo ayna saaxiibada Ronaldo mar dambe dha-dhamin kubad xilli Ac Milan si walba isaga ciyaaraysay garoonka dhexdiisa.
Daqiiqadii 62-aad ayuu Zlatan Ibrahimovic kooxda Ac Milan u dhaliyay rikoodhe loo dhigay kooxdiisa isaga oo gabi ahaan sheekada ciyaarta iyo dhanka ay u socoto badalay.
Ac Milan oo dhadhamisay goolka macaankiisa ayaa daqiiqadii 66-aad dhalisay goolka 2-aad oo ahaa goolka bar-baraha iyada oo uu u dhaliyay xiddiga Franck Kessie kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/2.
Laakiin Ac Milan ayaan halkaas ku joogsan waxana ay daqiiqadii 67-aadba dhalisay goolka 3-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Rafael Leo kaas oo ciyaarta ka dhigay 3/2.
Sheekada ciyaarta ayaa gabi ahaan isku badashay 6 daqiiqo gudohood iyada oo Ac Milan 3 gool ku dhalisay 6 daqiiqo iyaga oo dabka ku shiday Ronaldo Iyo Juventus.
Ac Milan ayaa markan ciyaarteeda u badashay ku dhufo oo ka dhaqaaq waxa aan uga jeedaa Weeraro rogaal celis ah iyaga oo qiyaas ahaan sidaas ku dhalin karay 3 gool oo kale.
Daqiiqadii 80-aad ayay Ac Milan dhalisay goolka 4-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Ante Rebic kaas oo ciyaarta ka dhigay 4/0 ay Ac Milan ugu hogaaminayso kulanka.
Juventus, Maurizio Sarri & Ronaldo oo garan waayay meesha ay wax ka khaldameen ayaa isku dayay in ay wax daba qabtaan laakiin Ac Milan oo hogaanka si raaxo leh ku haysa ayaa si fiican u difaacatay iyagaoo aad moodoba kulan ka qiimo badan Finalka Koobka adduunka sida ay u difaacanayeen.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay Ac Milan gaadhay guul weyn oo soo laabasho leh una awood sheegtay hogaamiyayaasha horyaalka Serie A-da
Falaanqeyn: Laba Arin Oo Laga Calaamadeeyay Kulamadii Chelsea Iyo Arsenal , Pulisic Salaan Sharafeed Ayuu Mudan Yahay
Asc WaaaW wlhi ninka qoray C/wali sxb sidey wax u dhaceen ayaad u soo bandhigtay Grylls inaba caadi ma aheen waa sidaad ku tilmaantay final Kiin aduun iyo mid kamacaan kkkkk wax aad il duuftay majiro runtii cawada AC.Milan waan ka qeyliyay waxaan maqli jiray rugcadaagii soo rogaal celi marka sidaan hadeey wax kusii wadaan Juve calankeda wuu dhacay